नेपालमा किन आयो अमेरिकी एयर फोर्सको जहाज ? – Satyapati
नेपालमा किन आयो अमेरिकी एयर फोर्सको जहाज ?
अमेरिकी एयर फोर्सको एउटा कार्गो जहाज शुक्रबार काठमाडौं आएर करिब तीन घण्टापछि फर्किएको छ । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएर पनि अझै विवादित रहेकै बेला अमेरिकी एयर फोर्सको जहाज आएपछि सामाजिक सञ्जालमा तरङ्ग फैलिएको छ ।
उक्त जहाज काठमाडौं विमानस्थलमा अवतरण भएपछि सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न चर्चाहरु भइरहेका छन् । विभिन्न फोटो तथा भिडियो राखेर अमेरिकी जहाज किन आएको ? भन्दै सर्वसाधारणबाट समेत चासो व्यक्त गरिएको छ ।
नेपालमा एमसीसी अनुमोदन भए अमेरिकी सेना प्रवेश गर्ने भन्दै प्रचार गर्नेहरुले ‘देख्यौं ?’ भन्ने आशयमा प्रचार गरिरहेका छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार उक्त कार्गो जहाजले अमेरिकी दूतावास र कूटनीतिक निकायका सामग्री लिएर आएको हो ।
अमेरिकी सेनाको जहाज पहिलो पटक आएको भने होइन, यसअघि पनि कूटनीतिक नियोगका सामग्री लिएर अमेरिकी सेनाको जहाज आउने गरेको थियो । पछिल्लो एक वर्षभित्रमा मात्र उक्त जहाज चौथोपटक काठमाडौंमा अवतरण गरेको हो ।
शुक्रबार बिहान सवा ९ बजे काठमाडौं अवतरण भएको उक्त अमेरिकी सेनाको जहाज पौने १२ बजे फर्किएको थियो । ‘स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु’ भनेजस्तै संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि अब अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने एकथरीमा आशंका भएरहेको बेला उक्त जहाज आएको हो ।
त्यसैले पनि उक्त जहाजबारे समाजिक सञ्जालमा चर्चाको विषय बनेको छ । सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा आएका तत्कालीन अमेरिकी उपविदेशमन्त्री डेभिड जे रान्जले एमसीसीलाई इन्डोप्यासिफिक रणनीतिकै हिस्सा भनेका थिए । त्यसप्रति नेपालका दलहरूले प्रश्न गरेपछि अमेरिकाले एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा नभएको बताउँदै आएका छन् ।
टिकटकमा भेटिएका धैर्य खेलाडी निर्मल दर्लामी
निर्वाचन लक्षित सुरक्षा रणनीति बनाउन बाँके प्रहरी ब्यस्त
‘एमसीसी सैन्य रणनीति अन्तर्गत होइन, संशोधन गर्न मिल्दैन’ (पूर्णपाठसहित)
बाँकेका १८ सहित २४ घण्टामा कुन जिल्लामा कति कोरोना संक्रमित थपिए?
देउवाको मन्त्रीमण्डलमा बाँकेले पायो दुई मन्त्री